हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा अघि बढेको सिद्धार्थ ग्रूपको २२ बर्षे यात्रा - Jagaran Post
Home/अर्थ बजार/हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा अघि बढेको सिद्धार्थ ग्रूपको २२ बर्षे यात्रा
कैलालीको टीकापुरबाट व्यवसाय सुरु गरेको सिद्धार्थ ग्रूपले अहिले आफ्नो २२औं स्थापना समारोह भव्यताका साथ मनाऊँदैछ। `हस्पिटालिटी फ्रम द हार्ट´ भन्ने मूल स्लोगनलाई आत्मसाथ गर्दै यस ग्रूपले दूई दशकको अबधिमा आफ्नो व्यवसायलाई पश्चिमको कैलाली देखि काठमान्डौ सम्म बिस्तार गर्दै रेष्टुरेन्ट, रिर्साेट, होटेल, हस्पिटालिटी इन्ष्टिच्युट, ट्रेड बिजनेश र बेकरी उद्योग गरी १७ वटा शाखाहरु संचालन गर्दै आएको आएको छ। सबै १७ शाखाहरुमा करिब १ हजार जना कर्मचारीले रोजगारीको अवसर पाएका छन् ।
पर्यटन ब्यबसायका क्षेत्रमा आबश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका सिद्धार्थ इन्ष्टिच्युटले स्वेदशी तथा बिदेशी कलेजहरुसंग सम्बन्धन लिएर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा र एक्जुकेटिभ डिप्लोमा लेभलका कोर्षहरु संचालन गर्दै आएको छ भने बार्षिक उत्सवकै अबसर पारेर सिद्धार्थ ग्रुपका देशैभरका शाखाले बिभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाएका छन स्थापना समारोह मनाऊंदैछन।
काठमान्डौको सुन्धारा,पुरानो बानेश्बर, तिनकुने र ललितपुरको धोबीघाटमा रहेको ग्रुपको शाखाले संयुक्त रुपमा दुर्गम क्षेत्रका गरिब एवं भूकम्प प्रभावित परिबारका सामुदायिक बिद्यालयबाट एलएलसी पास गरेका ५ जना बिद्यार्थीलाई गु्रपद्धारा संचालित सिद्धार्थ इन्ष्टिच्युट अफ हस्पिटालिटीमा आबासिय सुबिधासहित छात्रवृत्ति पनि उपलब्ध गराऊंदै आएका छन।
स्थापमा समारोहकै अवसरमा ग्रूपले नेपालगन्जको सिद्धार्थ कटेज र होटल सिद्धार्थ मिलेर संयुक्त रुपमा रक्तदान तथा नेपालगन्जको सुर्खेत रोडमा बृक्षारोपण गरेका छन भने ग्रूपको टिकापुर शाखाले टीकापुर अस्पतालका बिरामीहरुलाई फलफुल बितरण गरेको छ। त्यस्तै कर्णाली चिसापानी र सुर्खेत शाखाले नगर सरसफाई गरेका छन । बुटबल शाखाले ज्ञान ज्योति पुस्तकालयलाई फर्निचर समान बितरण गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै ग्रूपले हस्पिटालिटी ब्यबसाय सुरु गरेको २२ वर्ष पुरा भएकोे अबसरमा देशैभर रहेका शाखाहरुले आफ्ना पाहुनालाई केक खुबाएर स्बागत गरेका छन। सोही क्रममा नेपालगञ्जको चारतारे होटेल सिद्धार्थमा आयोजित बार्षिक उत्सब कार्यक्रमको शुभारम्भ नेपालगन्ज उप महानगरपालिकाका मेयर डा धबल शम्सेर राणाले केक काटेर गरे ।
देशैभर रहेका २५ वटा शाखाहरुले अनाथ बालबालिकाहरुलाई खाद्यान्न र शैक्षिक सामाग्रीहरु बितरण, रक्तदान, सरसफाई कार्यक्रम गरेर बार्षिक उत्सब मनाएको हो । सिद्धार्थ गु्रपका शाखाहरुमा आयोजना गरिएको रक्त दान कार्यक्रममा करिब २ सय जनाले रक्तदान गरेको जनाईएको छ।
बार्षिकउत्सबकै अबसरमा सिद्धार्थ गु्रपले प्रत्येक शाखाबाट लक्की ड्र बाट २ जना ग्राहकहरु छनौट गरी एक दिनका लागि निशुल्क खाजा, खाना र बसोबासको सुबिधा उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसैगरी गुल्मीको तम्घासस्थित रेसुङा क्याम्पसका छात्रालाई लक्षित गरेर सेनेटरी प्याड मेसिन उपलब्ध गराएको छ।
कैलालीको टीकापुरबाट २०५४ माघ २३ देखि सानो खाजा पसलबाट हपिस्टालिटी ब्यबसाय सुरु गरेको सिद्धार्थ ग्रुपका कर्णाली चिसापानी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत , बुटबल, चितबनको चुम्लिङटार र काठमाण्डौमा रेष्टुरेन्ट, होटेल, रिसोट, ट्रेड क्याफे, इष्ट्रिच्युट, कृषि फर्म र सहकारी गरी २५ वटा शाखाहरु रहेका छन। ग्रूपले पश्चिममा महेन्द्रनगर र पूर्वमा झापाको बिर्तामोडमा पनि सेवा बिस्तार गरेको जनाएको छ। झापाको बिर्तामोडमा निकट भबिश्य मै होटेलहरु संचालन गर्ने तयारी गरि रहेको ग्रूपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिएका छन।
२२औ बार्षिकउत्सबको अबसरमा सिद्धार्थ बिजनेश ग्रूप अफ हस्पिटालिटी अन्तर्गतका सबै शाखाहरुले माघ २३ गते देखि माघ मसान्तसम्म सबै शाखाहरुमा फुड र बेबरेजमा १५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
सिद्धार्थ ग्रूप अफ हस्पिटालिटिका सिईओ कृष्ण न्यौपाने
जिन्दगी बुझ्ने भइसक्दा लक्ष्मण न्यौपाने भारतमा काम गर्ने ‘लाहुरे’ भइसकेका थिए । गाउँमा काम थिएन । सामान्य पढाइबाहेक उनले माथिल्लो तह पढ्न सकेनन् । गाउँका अरू युवाजस्तै उनी पनि ‘लाहुर’ पसे । कहिले भारत र कहिले गाउँघर भौतारिँदै थिए । त्यसबेला उनका दाइले तम्घासमा सानो होटेल खोलेका थिए । मनभरि केही न केही गर्ने हुटहुटी थियो । होटेल खोल्ने सोच आयो । ‘लाहुरे’ हुँदा केही समय होटेलमा काम गरेका थिए । जे पनि गर्न सकिने बलियो इच्छाशक्ति थियो । गाउँघर अनि चिनेजानेको सहरमा होटेल खोल्दा भाँडा माझेको सबैले देख्ने थिए । गाउँघरमा इज्जतको सवाल पनि थियो । ०५४ सालमा गुल्मीबाट कैलाली झरे उनी । र, टीकापुरमा नास्ता पसल खोले, जसमा समोसा, चिया, मःम र चाउमिन खुब बिक्यो । त्यसपछि शुरु भयो, उनको होटेल यात्रा । एक वर्षपछि टीकापुरमै उनले सानो गेस्टहाउस सञ्चालनमा ल्याए । ०५६ सालमा उनको व्यवसायले नाम पायो ‘सिद्धार्थ’ । त्यसैमा उनले सबैलाई जोडे । आफन्त र साथीहरू मिलेर ‘सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटी’ भयो । यो समूहको अध्यक्ष छन्, लक्ष्मण । एउटा सानो नास्ता पसलबाट शुरु भएको यो यात्रामा हालसम्म १४ वटा ठूला होटेल र पारिवारिक रेस्टुराँ छन् । र, यो सञ्जालमा जोडिएका छन्, एक हजार कर्मचारी । पश्चिमको पीडा झल्काउने एउटा थेगो छ नेपालीमा ‘पश्चिममा त सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै आउँछ ।’
तर, लक्ष्मणको जीवनमा सफलताको सूर्य पश्चिमबाटै उदायो । मुलुकका सबैजसो पर्यटकीय क्षेत्र अनि ठूला शहरमा ‘हस्पिटालिटी’ बिजनेसमा स्थापित भइसकेको छ, सिद्धार्थ गुप्र । भाइ अनि ज्वाइँहरूलाई समेत आफ्नै व्यवसायमा हिस्सेदार बनाएर अहिले उनी धमाधम लगानी थप्दैछन् । २०५७ सालसम्म नेपालगन्जमा परिवार बसेर रमाउने रेस्टुराँ थिएनन् । उनले त्यहीबेला सिद्धार्थ कटेज खोले । बजारमा परिवारका सदस्यहरू रेस्टुरा“मा जाने संस्कारलाई बलियो गरी स्थापित गरे ।
मुलुकका सबैजसो पर्यटकीय क्षेत्र अनि ठूला शहरमा ‘हस्पिटालिटी’ बिजनेसमा स्थापित भइसकेको छ, सिद्धार्थ ग्रुप। भाइ र ज्वाइँहरूलाई पनि व्यवसायमा हिस्सेदार बनाएर लक्ष्मण न्यौपाने धमाधम होटेलमा लगानी थप्दैछन्।
अनि, ०६२ सालमा सिद्धार्थ होटेल नेपालगन्जमै खुल्यो, जुन अहिले ५० बाट एक सय २५ कोठामा विस्तार हुने क्रममा छ । शुरुवाती दिनमा नास्ता पसलका लागि ५० हजार पनि मुस्किलले जुटाएका थिए, लक्ष्मणले । आज उनको व्यवसायलाई ‘टक्कर’ दिन कुनै ‘कर्पोरेट हाउस’ले धेरै समय कुर्नुपर्छ । कसरी सफल हुन्छ मान्छे ? उनको सटिक जवाफ छ, ‘एउटै काममा लागिरहने, एक्लै नभई सामूहिकतालाई बलियो बनाउने ।’होटेल व्यवशायमा सफलता पाउनुको जवाफ एक लाइनको छ उनको, ‘हामी संस्कार र संस्कृतिका धनी हौँ, मैले त्यही संस्कारलाई व्यावसायिक रूप दिएको मात्रै हुँ ।’ दुई दशकको यो यात्रामा सिद्धार्थले व्यवसायमा धेरै फड्को मारिसकेको छ ।
कर्मचारीहरूलाई हस्पिटालिटी सिकाउनका लागि उसले आफ्नै तालिमकेन्द्र सञ्चालन गरेको छ । होटेलहरूलाई चाहिने आवश्यक जनशक्ति ऊ आफैं उत्पादन गर्छ । थोपा–थोपा बटुलेर व्यवसाय थालेका लक्ष्मण आफ्नो सफलताको सबैभन्दा बलियो कडी आफ्नै कर्मचारीहरू ठान्छन् । सामान्य कामबाट सिद्धार्थमा प्रवेश गरेका धेरै कर्मचारी अहिले यो प्रालिको सञ्चालक समितिमा छन् । कर्मचारीहरू नै मिलेर सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन गरेका छन् । २०५९ सालमा काठमाडौंको सुन्धारामा ‘सिद्धार्थ लज’ शुरु भयो ।
त्यसको केही समयपछि तीनकुनेमा ‘सिद्धार्थ’ ब्रान्डकै कटेज पनि खुल्यो । होटेल बिजनेसमा सिद्धार्थले लगानी थपेको थप्यै छ । भविष्य के छ त यसमा ? लक्ष्मण हरेस खाँदैनन् अथाह सम्भावना देख्छन् अझै । मुलुकका १४ ठाउँमा ‘आउटलेट’ खोलिसकेको सिद्धार्थ ग्रुपले । नास्ता पसल चलाउँदा कुनै सपना थिएन । बस्, केही गरिखाने हुटहुटी मात्रै थियो ।
तर, उनले जे गरे त्यही आज धेरैको सपना बनिदिएको छ । ग्रुपले अब चाँडै नै देशभरि ‘स्विट एन्ड बेकरी’ सेवा सञ्चालन गर्दैछ । त्यसको शुरुवात तीनकुनेबाट भइसकेको छ । चाँडै नेपालगन्जलगायत शहरमा पनि त्यो विस्तार हुनेछ । पूर्वका शहर अनि जुम्लाजस्ता ठाउँमा पनि सुविधासम्पन्न लज र कटेजहरू सञ्चालनमा ल्याउन योजना बन्दै छ।
नेतृत्व प्रभाव – नेपाल विद्युत प्राधिकरण ७७ अर्बभन्दा बढि नाफामा !
२०७७ असार ३, बुधबार ०९:१० गते
हुम्लाको स्याऊ प्रतिगोटा रू १० का दरले बिक्री हुँदै
२०७७ आश्विन २, शुक्रबार ११:५७ गते
२०७६ बैशाख २८, शनिबार ०४:१९ गते
श्रम स्विकृति खुलेसंगै बैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो पनि खुल्यो
२०७७ भाद्र १६, मंगलवार ००:१२ गते